यौन कसरी विकृति हो ? = डा. सूर्य पराजुली - Baikalpikkhabar
यौन कसरी विकृति हो ? = डा. सूर्य पराजुली
हिजोआज हामीले मानसिक यौन विकृतिका धेरै घटनाबारे सुन्छौं। कतिपय मानसिक यौन विकृतिका स–साना घटना गम्भीर रुपमा लिइन्छन् भने कतिपय गम्भीर घटनालार्इृ पनि हल्का रुपमा लिइने गरेको पाइन्छ। यौन प्राणी जगतका लागि प्राकृतिक आवश्यक प्रक्रिया हो। सन्तानोत्पादन गरी वंश विस्तारको लागि यो झन् आवश्यक हुन्छ। अझ मानिसको हकमा यौनको परिभाषा झन् विशिष्ट हुने गर्छ। यौवनावस्थामा विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो।
केटा वा केटीमा स्वाभाविक यौन क्रियाकलापमा असन्तुलन हुनु र मनोवैज्ञानिक रुपमा उथलपुथल हुनुलाई मानसिक यौन विकृति भनिन्छ। समाजमा मानसिक यौन विकृतिबाट सताइएका धेरै व्यक्ति हुन्छन्। हाम्रो समाज अझै पनि यौनका सम्बन्धमा त्यति खुलि नसकेका कारण यौन समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुभन्दा समस्या नै लुकाउने गरेको पाइन्छ।
तनावपूर्ण जीवन, डर, चिन्ता, उदासीनता, दीर्घरोग, यौनसम्बन्धी अज्ञानता वा अनविज्ञता, अधिक धूमपान, मद्यपान, यौनसम्बन्धी बढी जागरुक हुनु वा नराम्रो सोच, बानी–व्यहोरा, साथीहरुको लहैलहैमा लाग्नु, अश्लील चलचित्र र गतिविधिमा संलग्न हुनु, वेश्यावृत्ति, विभिन्न औषधिहरुको लामो प्रयोग जस्ता कारणले यौन विकृति उत्पन्न गराउँछन्।
कुनै व्यक्तिमा यौन इच्छा भए पनि लिङ्गमा उत्तेजना हुदैन। यस्तो अवस्थालाई यौन असक्षमता (इम्पोटेन्स¬¬) भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिले यौन सम्पर्क राखे पनि सन्तुष्टि दिन र प्राप्त गर्न सक्दैन। यो पुरुषमा देखिने मानसिक यौन विकृति हो। यसका धेरै कारण हुन सक्छन्। जस्तोः लिङ्गको संरचना विकृत रहनु, अण्डकोषको राम्रो विकास नहुनु, लिङ्ग काटिएको अवस्था, हाइड्रोसिल, हर्निया, फाइलारियासिस, क्यान्सर आदिका कारण यौन सन्तुष्टि प्राप्त हँुदैन। दुर्घटना भई लिङ्ग बिग्रनु, रक्सी सेवन, कोकेन, अफिमजस्ता लागूऔषधको प्रयोग र पक्षघातले पनि यौन दुर्वलता पैदा गर्छन्।
मानसिक यौन विकृतिको अर्को कारण ‘फरिजिडिटी’ हो। यो महिलामा हुने विकृति हो। यसमा महिला यौनसम्पर्कको शुरुआत गर्न असक्षम हुन्छन्। सके पनि पूर्णता दिन नसक्ने हुन्छन्। यसका मुख्य कारणमा महिलालाई सानोमा यौन दुव्र्यवहार हुनु, बलात्कार हुनु, दुर्घटनामा पर्नु आदि पर्दछन्। कसैलाई यौन सम्पर्क गर्दा योनीमा अत्यधिक दुख्ने हुन्छ।
निद्रामा वीर्य स्खलन (स्वप्नदोष) ले पनि कतिपय अवस्थामा मानसिक यौन विकृति पैदा गर्छ। तर स्वप्नदोष हुँदैमा डराउनु पर्दैन। यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो। कतिमा त स्वप्नदोष भएमा नपुंसक भइन्छ भन्ने डर पनि रहेको पाइन्छ। त्यसैले यसलाई विकृतिको रुपमा नलिएर सकारात्मक रुपमा लिने गर्नुपर्छ।
शीघ्र स्खलनले पनि यौन जीवनमा समस्या निम्त्याउँछ। यौन सन्तुष्टि पाउनु अगावै वीर्य स्खलन हुनुलाई शीघ्र स्खलन भनिन्छ। यसका केही कारणहरुमा पीर, तनाव, यौनबारे अनविज्ञता, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, यौन साथीप्रतिको नकारात्मक धारणा, पाको उमेर, दीर्घरोग, औषधिको प्रयोग र असुरक्षित वातावरण आदि पर्दछन्।
हस्तमैथुन सामान्य भएपनि कसैले यसलाई समस्याकै रुपमा हेरेको पाइन्छ। पुरुष वा महिलाले आफनो यौन अङ्गलाई आफंै उत्तेजनामा ल्याएर यौन सन्तुष्टि लिनुलाई हस्तमैथुन भनिन्छ। यसमा पुरुषले हातले लिङ्गलाई उत्तेजित बनाएर वीर्य स्खलन गराई यौन सन्तुष्टि लिने गर्छन् भने महिलाले भने आप्mनो भङ्गाकुर खेलाई औंला योनीमा पसाएर वा लिङ्गजस्ता वस्तुको प्रयोग गरी यौन सन्तुष्टि लिने गरेको पाइन्छ। वास्तवमा उमेर पुगेपछि हस्तमैथुन गर्नु यौन सन्तुष्टिको उपयुक्त माध्यम हो। तर हस्तमैथुनले नपुंसक र कमजोर भइन्छ भन्ने भ्रम समाजमा छ। हस्तमैथुन धेरै हिसाबले सकारात्मक मानिन्छ। यौन सन्तुष्टिको लागि वेश्यालय जाने वा असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्नाले एचआइभि, यौनरोग, अनिच्छित गर्भधारण र यौन अपराध हुन्छ। त्यसैले एक हदसम्म हस्तमैथुनले मानसिक यौन विकृतिको निराकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
-(डा. सूर्य पराजुली, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान)
मङ्गलबार, ०८ भदौ, २०७८, साँझको ०५:०४ बजे
हेर्नुहोस्, सेक्स सम्बन्धी २५ तथ्य र भ्रम
भ्रम १ – सेक्सका क्रममा महिलाहरु पनि स्खलित हुन्छन् । २ – यौन सन्तुष्टिका लागि एकैसमयमा चरमोत्कर्ष आवश्यक हुन्छ । ३ – पुरुषको मात्र स्वप्नदोष हुन्छ । ४ – स्वप्नदोष यौन समस्याको संकेत हो । ५ – कुमारी युवतीसंग सेक्स
अर्काकी पत्नीसँग शारीरिक सम्पर्क राख्नु स्वतन्त्रताको विषय हो ?
व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा पत्नीहरुलाई कसैसँग प्रेम गर्ने र यौन सम्बन्ध राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ कि हुँदैन ? यो एउटा रोचक वहसको विषय हो । पूर्वीय दण्ड विधानमा अर्काकी पत्नीसँग शारीरिक सम्पर्क राख्ने पुरुषलाई विभिन्न कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ तर उस्तै अवस्थामा महिलालाई
यौन शारीरिक क्रिया हो । तर, यसमा हाम्रो भावना, कल्पना जस्ता मानसिक कुराले प्राथमिकता पाउँछ । जुन यौन क्रियामा भावना हुँदैन, त्यो बर्बरतापूर्ण सम्बन्धलाई ‘यौन हिंसा’को रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको सम्बन्धले यौनको कुलत जनाउँछ । खासगरी कामवासनाले ग्रस्त
एजेन्सी / यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञहरुले पुरुष र महिला दुवैलाई नियमित यौन सम्बन्धले फाइदा गर्ने बताएका छन् । विभिन्न प्रकारका अध्ययनअनुसन्धानले नियमित यौन सम्बन्ध स्वास्थ्यका लागि राम्रो भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । धेरैले पुरुषमा मात्र यौन सम्बन्धले फाइदा
सेक्स ड्राइभलाई बुस्ट गर्न भान्सामा पाइने मेथी महत्त्वपूर्ण
खराब जीवनशैली, तनाव, एन्जाइटी जस्ता समस्याहरुका कारण मानिसको यौन जीवनमा समस्या आउँछ । महिलाहरुमा पनि दैनिक जीवनमा आउने विभिन्न समस्याले यौन सम्बन्धी समस्या आउँछ । महिलाहरुमा सेक्स ड्राइभलाई बुस्ट गर्न लागि भान्सामा पाइने मेथी निकै महत्त्वपूर्ण हुने एक अध्ययनले बताएको
महिलाको गर्धन दुखाइ, ढाड दुखाइ र कम्मर दुखाइ कम गर्न नियमित यौन
एजेन्सी / यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञहरुले पुरुष र महिला दुवैलाई नियमित यौन सम्बन्धले फाइदा गर्ने बताएका छन् । विभिन्न प्रकारका अध्ययनअनुसन्धानले नियमित यौन सम्बन्ध स्वास्थ्यका लागि राम्रो भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । धेरैले पुरुषमा मात्र यौन सम्बन्धले
भ्रम १ – सेक्सका क्रममा महिलाहरु पनि स्खलित...
व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा पत्नीहरुलाई कसैसँग प्रेम गर्ने र यौन...
हिजोआज हामीले मानसिक यौन विकृतिका धेरै घटनाबारे सुन्छौं।...
यौन शारीरिक क्रिया हो । तर, यसमा हाम्रो...
एजेन्सी / यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञहरुले...